Fitaovana haino aman-jery sosialy 25 mahatalanjona | Martech Zone
Sabotsy 2 Novambra 2013 Douglas Karr
Zava-dehibe ny manamarika fa ny sehatra media sosialy dia samy hafa be amin'ny tanjony sy ny endrik'izy ireo. Ity infographic avy amin'ny Fihaonana an-tampon'ny tetikady momba ny paikady sosialy 2013 mandrava tsara ireo sokajy.
Rehefa manomana paikady ara-tsosialy orinasa iray, ny habetsaky ny fitaovana misy ho an'ny fitantanana media sosialy dia mety goavana. Nanangona fitaovana lehibe 25 izahay hanombohana anao sy ny ekipanao, voasokajy ho karazana fitaovana 5: Fihainoana ara-tsosialy, fifanakalozan-kevitra ara-tsosialy, marketing ara-tsosialy, analytics ara-tsosialy ary fampitaovana ara-tsosialy.
Mahafinaritra ny mahita ny mpanohana anay, Meltwater Buzz, mametraka ny lisitr'ireo sehatra mihaino ny fiarahamonina - mahazo valiny mahavariana avy amin'ilay fitaovana izahay!
Tags: pulema agorafiheveranaargylesocialfamantaranandrohaino aman-jery sakaizacrowdboostermanao siansagrouphighhootsuitekloutkredrano mitsonikameltwater buzzpeekanalyticspostlingshorttackkivazivazyrefesina tsotra fotsinyfanadihadiana ara-tsosialyResadresaka sosialyMpanan-kery sosialyfihainoana ara-tsosialymarketing ara-tsosialyresaka sosialympiara-miasa sosialysourcemetricsspredfastspraylrsproutsocialtrendrrviralheat
Bunndle: Tambajotra fizarana rindranasa finday
4 Nov 2013 amin'ny 3:05 maraina
Salama Douglas, misaotra betsaka tamin'ny lisitranao, tena manampy tokoa ny mampifantoka ny sahan'ireo haino aman-jery sosialy 😉 Fa malahelo fatratra ao amin'ilay lisitra aho. Izy io dia ny allfacebookstats taloha. Androany no fitaovana matihanina indrindra. Inona no tsara momba izany? Manana metrika mihoatra ny 100 ianao handinihana ny Facebook, Twitter, YouTube ary GooglePlus. Ary azonao atao ny manavaka ny fandinihanao mba hifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Tena manampy ny mahita hoe iza amin'ireo tetikady marketing no mahomby indrindra. Tokony hanandrana ianao.
4 Nov 2013 tamin'ny 2:31 PM
Misaotra betsaka tamin'ny fampidirana ny Postling, izay ao anatin'ny sehatra LocalVox ihany koa. Voninahitra ho anay izahay ao amin'ny lisitrao amin'ny maha ekipa mifantoka amin'ny faritra eo an-toerana ny media sosialy sy ireo fanamby tsy manam-paharoa ao. Nalefanay tao amin'ny bilaoginay izany ary misaotra anao!
6 Nov 2013 amin'ny 3:27 maraina
Misaotra nizara ity loharano ity .. fitaovana lehibe nozarainao ..
8 Nov 2013 amin'ny 12:35 maraina
Misaotra tamin'ilay lahatsoratra mahafinaritra momba ny fitaovana media sosialy izay nozarainao. amin'izao vanim-potoana izao dia manana fitaovana maro handinihana ny facebook, twitter ary google plus ary azonao atao ny manavaka ny famakafakana ataonao mifanaraka amin'izay ilainao. Manampy be dia be hahalalana hoe iza amin'ireo tetikady varotrao.
9 Nov 2013 amin'ny 6:53 maraina
Ankasitrahana ny fanampiana tonga lafatra 🙂
Aug 16, 2016 amin'ny 8: 30 AM
Ny tiako indrindra dia Blog2Social. Mino manokana aho fa ny Blog2Social dia iray amin'ireo plugin fampidirana haino aman-jery sosialy lehibe satria tsy misy ny fizotran'ny fametrahana mpizara tokony hatao. Mamela ny mpanoratra lahatsoratra handroso mivantana any amin'ny solaitrabe fandefasana Blog2Social Word-press, izay misy lahatsoratra fandefasana mialoha omena. Rehefa avy namboarina ireo lahatsoratra dia nandahatra ireo lahatsoratra na namoaka azy ireo tsy misy hatak'andro ny mpanoratra.